Daniela 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
3 Nanao sarivongana+ volamena i Nebokadnezara Mpanjaka: Enimpolo hakiho ny haavony, ary enina hakiho ny sakany. Dia natsangany teo amin’ny lemak’i Dora teo amin’ny faritanin’i Babylona+ izy io. 2 Ary naniraka olona i Nebokadnezara Mpanjaka mba hamory ny lehibem-paritany, sy ny mpiadidy,+ sy ny governora, sy ny mpanolo-tsaina, sy ny mpitahiry ny harenam-panjakana, sy ny mpitsara, sy ny mpampihatra lalàna,+ ary izay rehetra nitantan-draharaha tao amin’ireo faritany, ho tonga amin’ny fitokanana+ an’ilay sarivongana natsangan’i Nebokadnezara Mpanjaka. 3 Dia nivory ny lehibem-paritany,+ sy ny mpiadidy, sy ny governora, sy ny mpanolo-tsaina, sy ny mpitahiry ny harenam-panjakana, sy ny mpitsara, sy ny mpampihatra lalàna, ary izay rehetra nitantan-draharaha tao amin’ireo faritany mba hitokana an’ilay sary natsangan’i Nebokadnezara Mpanjaka. Ary nijoro teo anoloan’ilay sary natsangan’i Nebokadnezara izy ireo. 4 Koa niantsoantso mafy ny mpitondra hafatra,+ hoe: “Izao no teny ambara aminareo, ry vahoaka sy firenena ary olona samy hafa fiteny:+ 5 Raha vao renareo ny feon’ny anjombona sy ny sodina sy ny valiha vata sy ny harpa telozoro sy ny lokanga sy ny sodina misy kitapon-drivotra ary ny zavamaneno isan-karazany,+ dia miankohofa sy mivavaha amin’ilay sarivongana volamena natsangan’i Nebokadnezara Mpanjaka. 6 Ary izay tsy miankohoka sy tsy mivavaka+ amin’ilay sary dia hatsipy avy hatrany+ ao anaty lafaoro misy afo mivaivay.”+ 7 Koa niankohoka sy nivavaka tamin’ilay sarivongana volamena natsangan’i Nebokadnezara Mpanjaka ny vahoaka sy ny firenena+ ary ny olona samy hafa fiteny rehetra, raha vao nandre ny feon’ny anjombona sy ny sodina sy ny valiha vata sy ny harpa telozoro sy ny lokanga ary ny zavamaneno isan-karazany. 8 Tamin’izay dia nisy Kaldeanina nanatona ny mpanjaka ka niampanga an’ireo Jiosy.+ 9 Dia hoy izy ireo tamin’i Nebokadnezara Mpanjaka: “Ho ela velona anie ianao, ry mpanjaka ô!+ 10 Efa namoaka didy ianao, ry mpanjaka ô, fa izay mandre ny feon’ny anjombona sy ny sodina sy ny valiha vata sy ny harpa telozoro sy ny lokanga sy ny sodina misy kitapon-drivotra ary ny zavamaneno isan-karazany,+ dia tokony hiankohoka sy hivavaka amin’ilay sarivongana volamena. 11 Ary izay tsy miankohoka na mivavaka amin’ilay sary dia hatsipy ao anaty lafaoro misy afo mivaivay.+ 12 Misy Jiosy notendrenao hitantan-draharaha eto amin’ny faritanin’i Babylona,+ dia i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tsy niraharaha ny teninao anefa izy ireo, ry mpanjaka ô, ka tsy nanompo an’ireo andriamanitrao, na nivavaka tamin’ilay sarivongana volamena natsanganao.”+ 13 Dia romotry ny hatezerana i Nebokadnezara+ ka nasainy nalaina i Sadraka sy Mesaka ary Abednego.+ Koa nentina teo anatrehan’ny mpanjaka izy telo lahy. 14 Ary hoy i Nebokadnezara taminy: “Marina tokoa ve, ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, fa tsy nanompo an’ireo andriamanitro+ ianareo, na nivavaka tamin’ilay sarivongana volamena natsangako?+ 15 Koa ankehitriny, raha vonona ianareo ka miankohoka sy mivavaka amin’ilay sary nataoko, rehefa mandre ny feon’ny anjombona sy ny sodina sy ny valiha vata sy ny harpa telozoro sy ny lokanga sy ny sodina misy kitapon-drivotra ary ny zavamaneno isan-karazany,+ dia tsara izany. Fa raha tsy mivavaka amin’ilay sary kosa ianareo, dia hatsipy avy hatrany ao anaty lafaoro misy afo mivaivay. Ary iza moa izany andriamanitra mahavonjy anareo eo an-tanako izany?”+ 16 Dia namaly i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ka niteny tamin’ny mpanjaka hoe: “Tsy voatery hamaly anao momba izany akory izahay,+ ry Nebokadnezara ô! 17 Raha tsy maintsy atsipy ao izahay, dia mahavonjy anay ilay Andriamanitra tompoinay. Hamonjy anay+ avy ao amin’ny lafaoro misy afo mivaivay sy eo an-tananao izy, ry mpanjaka ô! 18 Ary na tsy hamonjy anay aza izy, dia aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa tsy hanompo an’ireo andriamanitrao izahay, ary tsy hivavaka+ amin’ilay sarivongana volamena natsanganao.” 19 Dia romotry ny hatezerana i Nebokadnezara, ka hita teny amin’ny endriny fa vinitra tamin’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego izy. Koa nasainy nohafanaina avo fito heny noho ny mahazatra ny lafaoro. 20 Ary vatan-dehilahy matanjaka+ anisan’ny tafiny no nasainy namatotra an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mba hanipy azy ireo tao anatin’ilay lafaoro misy afo mivaivay.+ 21 Koa nafatotra izy telo lahy, raha mbola teny aminy ny lamba fitafiny sy ny akanjony sy ny satrony ary ny fitafiany hafa. Dia natsipy tao anatin’ilay lafaoro misy afo mivaivay izy ireo. 22 Koa satria henjana ny tenin’ny mpanjaka ka natao tena nahamay be ilay lafaoro, dia ireo vatan-dehilahy nibata an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego no matin’ny lelafo. 23 Ary niantonta tao anatin’ilay lafaoro misy afo mivaivay izy telo lahy, izany hoe i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, raha mbola nifatotra.+ 24 Tamin’izay dia raiki-tahotra i Nebokadnezara Mpanjaka ka nitsangana haingana. Ary hoy izy tamin’ny olom-panjakana ambony: “Tsy telo lahy nifatotra ve no natsipintsika tao anaty afo?”+ Dia hoy ireo tamin’ny mpanjaka: “Marina izany, ry mpanjaka ô!” 25 Ary hoy ny mpanjaka: “Efa-dahy mirijarija anefa no hitako mandehandeha tsy mifatotra ao anaty afo, nefa tsy misy maninona, ary toy ny zanak’ireo andriamanitra no fahitana an’ilay fahefatra.”+ 26 Koa nanatona teo am-baravaran’ilay lafaoro misy afo mivaivay i Nebokadnezara,+ ka niteny hoe: “Ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon’ilay Andriamanitra Avo Indrindra,+ mivoaha ka avia atỳ!” Dia nivoaka avy tao anaty afo i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. 27 Ary nijery azy telo lahy ny lehibem-paritany sy ny mpiadidy sy ny governora ary ny olom-panjakana ambony+ izay tafavory teo, ka hitany fa tsy nisy vokany tamin’izy ireo ny afo,+ sady tsy nisy nikainkona ny volon-dohany,+ tsy niova ny lamba fitafiny, ary tsy nisy fofon’afo akory taminy. 28 Ary hoy i Nebokadnezara: “Hisaorana anie ny Andriamanitr’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego!+ Fa naniraka ny anjeliny+ izy hamonjy ny mpanompony, izay nitoky taminy+ ka tsy nety nanaraka ny tenin’ny mpanjaka fa vonona hamoy ny ainy, satria tsy nanaiky hanompo+ na hivavaka+ amin’andriamani-kafa afa-tsy ny Andriamaniny ihany.+ 29 Koa mamoaka didy aho+ fa izay vahoaka na firenena na olona avy amin’ny fiteny samy hafa ka miteny manohitra an’ilay Andriamanitr’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia hotapahina hatao tsy hisy rantsambatana intsony+ izy ary ny tranony hatao kabinem-bahoaka.+ Fa tsy misy andriamani-kafa mahavonjy toa azy.”+ 30 Dia nataon’ny mpanjaka izay nampandeha tsara ny fiainan’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, teo amin’ny faritanin’i Babylona.+